Donald Trump oo u carooday ninka gabadhiisa qaba – Mogadishutimes
Donald Trump oo u carooday ninka gabadhiisa qaba
Waxaa la sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu u carooday ninka gabadhiisa qaba isla markaasna ah la taliyeyaashiisa kuwa uu ugu kalsoon yahay Jared Kushner. Madaxweynaha wuxuu ka xanaaqay in uu Mr. Kushner vacation isbuuc ah qaatay waqti uu Donald Trump shaqooyin adag gacmaha kula jiray.
Arintii ugu weyneyd ee waqtigaa socotay waxay ahayd isbadalkii lagu sameyn rabay sharcigii caafimaadka ee Obama Care. Donald Trump waa ku guuldareystay arinkaa.
Shaqaalihiisa intooda badan waxay waqtigaa ku mashquul sanaayeen sidii ay baarlamaanka uga gadi lahaayeen sharciga cusub. Jared Kushner wuxuuu waqtigaa xaasaasiga ah ku sugnaa meel lagu raaxeysto oo ku taala gobolka Colorado.
Jared Kushner, xaaskiisa iyo ilmihiisa oo vacation u jooga Aspen, Colorado
Afhayeenka madaxweynaha waa beeniyay in uu u xanaaqay wiilka uu sodoga u yahay. Donald Trump wuxuu la kulmay guuldaradii ugu weyneyd tan iyo intii uu madaxweynaha ahaa kadib markuu ku guuldareystay in la ansixiyo sharciga caafimaadka oo uu balanqaadyo badan hore uga sameeyay.